Ra’iisul wasaare Kheyre “Dhalinyaradu waa udub dhexaadka dowladnimada Soomaaliyeed..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre “Dhalinyaradu waa udub dhexaadka dowladnimada Soomaaliyeed..”
Munaasabad ay kasoo qeyb galeen ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, xubno ka tirsan golaha wasiiradda, baarlamaanka, diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Munaasabadaasi oo ahayd mid looga wada tashanaayey sidii loo sameyn lahaa siyaasad mideysan oo dhalinyarada hagta, ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
“Dhalinyaradu waa udub dhexaadka dowladnimada Soomaaliyeed, horumar kasta oo aan hiigsaneyno waxaa hormuud u ah dhalinyarada, maanta waxaan haysanaa fursado dahabi ah oo aan gacan uga geysan karno dib-u-dhiska iyo soo celinta sharaftii iyo karaamadii ay Soomaaliya lahayd” Ayuu yiri ra’iisul wasaare Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa xusey in caqabadaha ugu weyn ee dhalinyarada Soomaalida soo wajahey muddooyinkan dambe ay ka mid ahaayeen falalka argagixisada iyo dhibaatooyinka kale ee soo biiray, kadib burburkii Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre kahor ayaa waxaa iyana halkaasi hadal ka jeedisey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye.
Waxay sheegtay in shirkaan ay uljeedadiisu yahay in wax badan iska bedalaan qaabka iyo hanaanka ciyaaraha Soomaaliya sidoo kalena dhallinyarada Soomaaliyeed loogu sameeyo fursado dhinac kasta ah.